शेयर बजार – Banking Khabar
बैंकिङ खबर । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विशेष साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । विशेष साधारण सभाले बैंकले धितोपत्र दलाल, धितोपत्र ब्यापारी तथा बजार निर्माता सम्बन्धि कार्य गर्न सहायक कम्पनी स्थापना गर्ने सम्बन्धमा विशेष प्रस्ताब पारित गरेको छ । बैंक संचालक समितिका अध्यक्ष महेन्द्रमान गुरुङ्गको सभापतित्वमा सम्पन्न सो विशेष साधारण सभामा अध्यक्ष गुरुङ्गले प्रस्ताब प्रस्तुत
बैंकिङ खबर । बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया स्थगित भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले तत्कालका लागि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कम स्थगत गरिएको जनाएको छ । संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिले साउन ३० गते नेप्सेलाई दिएको निर्देशन अनुसार बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने काम तत्कालको लागि बन्द गरिएको हो ।
‘एनआईसी एशिया ब्यालेन्स्ड फण्ड’मा आवेदन दिने म्याद विहीबारसम्म
बैंकिङ खबर । गत साउन ८ गतेदेखि खुला रहेको एनआईसी एशिया ब्यालेन्स्ड फण्डको निष्काशन आगामी विशीबार बन्द हुने भएको छ । एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेडले १० करोड ६२ लाख ५० हजार कित्ता (इकाई) को निष्काशन तथा बिक्री गरिरहेको छ, जसमा न्यूनतम १ हजार देखि साढे १७ करोड रुपैयाँसम्म आवेदन बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
एफपीओको मूल्य निर्धारण गर्ने तरिका
बैंकिङ खबर । धितोपत्र निष्कासन निर्देशिका २०६५ को दफा ९ मा नयाँ निष्कासन (फर्दर पब्लिक इस्यू) सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यस दफा अनुसार एफपीओ निष्कासन गर्न चाहने संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा नयाँ निष्कासन गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने छ । एफपीओ निष्काशन भएपछि पुँजी संरचना तथा सञ्चालक समितिमा हुने परिवर्तनसम्बन्धमा प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था
बैंकिङ खबर । वि.सं. १९९४ मा विराटनगर जुट मिल्स र नेपाल बैंक लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरेपछि नेपालमा शेयर कारोबार शुरु भएको थियो । दुवै कम्पनीले शेयर निष्काशन तथा विक्री व्यवस्थापन आफैंले गरेका थिए । विराटनगर जुट मिल्स र नेपाल बैंकले शेयरजारी गरेपछि धेरै वर्षसम्म पूँजी बजारमा अन्य कुनै पनि संस्थाको प्रवेश भएन । वि.सं.
बैंकिङ खबर । सूचीकृत सङ्गठित सस्ंथाहरूको परिपालना अधिकृतले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा एकरुपता ल्याउनका लागि बोर्डले संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदनको ढाँचा स्वीकृत गरी आ.ब. २०७५।७६ देखिको बार्षिक प्रतिवेदनमा लागू गर्ने भएको छ । सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको कामकारबाहीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गरी शेयरधनी लगायत सरोकारवालाहरु प्रति उत्तरदायी बनाई संस्थागत सुशासन प्रवद्र्धन गर्नका
सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकरको काम गर्न वाणिज्य बैंकलाई बाटो खुल्यो
बैंकिङ खबर । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र सदस्य दलाल व्यवसायी अनुमतिपत्रका लागि सिफारीस कार्यविधि २०७६ लागु गरेको छ । यससँगै वाणिज्य बैंकलाई सहायक कम्पनी मार्फत धितोपत्र खरिद बिक्री गर्ने बाटो खुलेको छ । नेपालको पूँजीबजारको विस्तार तथा लगानीकर्ताको पहुँचमा अभिवृद्धि गर्न उक्त कार्यविधि लागु गरेको नेप्सेले जनाएको छ ।
धितोपत्र बोर्डको सूचना प्रविधि नीति कार्यान्वयनमा, यस्तो छ नीति
बैंकिङ खबर । आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप नेपाल धितोपत्र बोर्डले सुचना प्रविधि नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । बोर्डले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै धितोपत्र तथा बस्तु विनियमय बजारसँग सम्बन्धी सूचना प्रविधि पुर्वाधारको विस्तार गर्न प्रविधि नीति ल्याएको जनाएको छ । सूचना प्रविधिको उपयोगमार्फत धितोपत्र तथा बस्तु विनियम बजार नियमन, सञ्चालन तथा लगानीलाई
एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्डका ईकाइधनीहरुले १० प्रतिशत लाभांश पाउने
बैंकिङ खबर । एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्डका ईकाइधनीहरुले १० प्रतिशत (करसहित)का दरले हुन आउने आठ करोड ३५ लाख २० हजार रुपैयाँ नगद लाभांश पाउने भएका छन् । एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेडको शुक्रबार बसेको संचालक समितिको ६१औँ वैठकले आर्थिक वर्ष २०७५।७६ का लागि नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड एनआईसी
सिद्धार्थ ईक्वीटी फण्डका इकाईधनीले ११ प्रतिशत प्रतिफल पाउने
बैंकिङ खबर । सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड योजना ब्यवस्थापक रही संचालनमा रहेको सिद्धार्थ ईक्वीटी फण्डको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लेखापरिक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ । योजनाको लेखापरिक्षण कार्य सम्पन्न भए लगत्तै योजना व्यवस्थापक सिद्धार्थ क्यापिटलको साउन ६ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि सिद्धार्थ ईक्वीटी फण्डका इकाईधनीहरुलाई ११
संस्थापक सेयर धनीको ‘लक इन पिरियड’ बढ्ने
बैंकिङ खबर । सूचीकृत कम्पनीका संस्थापकको ‘लक इन पिरियड’ बढ्ने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले चालू आर्थिक वर्षभित्रमा संस्थापक सेयर धनीहरूले लक इन पिरियड बढाउने तयारी गरेको हो । हाल संस्थापकको ‘लक इन पिरियड’ तीन वर्ष रहेको छ । यस अवधिमा संस्थापक नै विभिन्न बहानामा निर्माण चरणमा ठेक्कापट्टामा कमिसन, सुविधा लिएर तीन वर्षमै सेयर
बजार पुँजीकरण २४.३३ प्रतिशतले बढ्यो, कारोबारमा कमी
बैंकिङ खबर । आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को प्रथम ११ महिनामा धितोपत्रको दोस्रो बजारको बजार पुँजीकरण १५ खर्ब ७९ अर्ब पुगेको छ । बजार पुँजीकरण गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २४.३३ प्रतिशतले बढेको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको बजारको पुँजीकरण भएको थियो । फ्लोट
बैंकको शेयर कारोबार रोक्का नगर्न लगानीकर्ताहरुको माग
बैंकिङ खबर । मर्जरका लागि २२ वटा वाणिज्य बैंकहरुले प्रतिवद्धता राष्ट्र बैंकमा गरि सकेका छन् । प्रतिवद्धता पश्चात मर्जरको सहमति गरेका बैंकहरुको शेयर कारोबार रोकिएको हो । शेयर बजारमा कारोबार रोकिँदा अहिले लगानीकर्तालाई अन्यौल सिर्जना भएको छ । मर्जरको सम्पुर्ण प्रकृयाहरु पुरा भइसके पश्चात बैंकहरुको पुनः शेयर कारोबार सुचारु गरिने नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह
एक वर्षमा २८ कम्पनीको आईपिओ निष्काशन
बैंकिङ खबर । चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म २८ कम्पनीले १८ अर्बभन्दा बढीको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्काशन गरेका छन् । गत साउनदेखि हालसम्म नेपाल धितोपत्र बोर्डले १८ अर्ब ६५ करोड ८५ लाख ६२ हजार ८ सय रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासनका लागि अनुमति दिएको हो । सेयर निष्काशन अनुमति पाएका २८ कम्पनीमध्ये, १६ वटा हाइड्रोपावर कम्पनी र